As of Thu, 19 Sep, 2019 23:10
दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र सातवटा हेलिप्याड निर्माण गरेको छ । विपद् पूर्वतयारीस्वरूप शैलुङ गाउँपालिकाका आठवटा वडालाई पायक पर्ने गरी हेलिप्याड निर्माण गरिएको हो ।
विपद्को समयमा आकस्मिक उद्धार कार्यलाई सहज बनाउन हेलिप्याड निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत दुलालले जानकारी दिए । आकस्मिक उद्धारमा सडक सञ्जालभन्दा हेलिकप्टरकै प्रयोग गर्दा प्रकोपमा परी हुने घाइतेको तत्काल उपचार हुँदा ज्यान बचाउन सकिने भएकाले पनि हेलिकप्टर प्रयोग गर्न हेलिप्याड निर्माण गरिएको हो । विपद् पूर्वसूचना दिएर नआउने भएकाले विपद् आएपछि आत्तिएर काम गर्नुभन्दा पहिले नै सतर्क रहन आवश्यक पूर्वतयारीस्वरूप गाउँपालिकाले यस्तो काम गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा हेलिप्याड निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । सातवटा हेलिप्याड निर्माण गर्न ३० लाख खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ ताम्चेतको भष्मे डाँडा, वडा नं. २ भुषाफेदाको थगम, वडा नं. ३ र ४ लाई पायक पर्ने गरी दुर्गामावि निकट मागामा हेलिप्याड निर्माण गरिएको छ । यस्तै वडा नम्बर ५ का लागि बोझेनी डाँडा, ६ का लागि घडीको आहाल, ७ का लागि सागुते र ८ का लागि भैंसे बजारमा हेलिप्याड निर्माण गरिएको शैलुङ गाउँपालिकाले बताएको छ ।
विपद्को समयमा हेलिकप्टर अवतरण र उडानका लागि प्रयोग गर्न हेलिप्याड बनाइएका स्थानलाई सामान्य अवस्थामा खेलकुद मैदानका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गाउँपालिकाको भनाइ छ ।